JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Sadaffaa -
JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Sadaffaa
Taammanaa Bitimaa irraa, 18.07.2017
Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, barreeffata kana kutaalee tokkoffaa fi lammaffaa akka gaariitti dhamdhamachuu keessaniif, mee hedduu galatoomaa! Duubbiin galatoomfannaa callaa irratti dhabbattee waan haftuu mitii, kunoo kutaa sadaffaa kanas mee ilaalaa-kaa! Dabaleesoo, as-irratti waanan jabeessee isin yaadachiisu tokkotu jira. Jechoota kana ennuma tokkicha dubbiftaniitoo bira dabruu otoo hin taane, akkuma wanneen biroo isaan ciccimoo yeroolee addaddaa irra deebitanii dubbisuu fi mataatti qabachuun daran barbaachisaa dha. Kan barchisaa tahu anaa fi eenyu faaf otoo hin taane, Afaan Oromoo keessan, afaan nadhii dammaa kanaaf sonaan barbaachisa! Eeyyee:
Afaan nadhii dammaa
Kanan na dhibaaree
Ittan cimsa ammaa!
Jedhaatii akkuma akkaayyuuwwan keessan durii geerraraa, geerrarsiisaa itti-nuuf cimsaa! Hayyee, Waaqni guddichii fi tokkichi sun wanneen gaggaarii maraa mee itti isiniif haa simsu!
Ani seensa isa hardhaa kana keessatti waayee seera hirmaata-dubbii (seerlugaa) Afaan Oromoo keessaan hamma wayii isiniif dhiyeessa. Barreeffatoota amman tana afaan keenyaan bahaa jiran keessatti, dogoggora tokko tokko waanan qalbeeffaddheefan isaan akka sirraawaniif waa jedha. Uummata jenneetoo “uummatni” hin jennu; “uummanni” jenna malee! Seera afaan keenyaatu akka akkanatti dubbannuu fi barreessinu nu akeekkachiisa. Akkanuma:
jechoota – jechoonni
harqoota – harqoonni
dhaloota – dhaloonni
irbaata – irbaanni
gumaata – gumaanni
ijibbaata – ijibbaanni
furmaata – furmaanni
gatata – gatanni
imaammata – imaammanni
galfata – galfanni —
Faa akkanatti barreesina. Mee hardhaaf kunuu ni gayaa, seerota garii kutaalee itti-fufaman keessatti ilaala. Kunoo, amma kanaa gaditti jechoota kutaa kanaaf dhiyaatan, mee ilaalaa!
JECHOOTA DIGDAMII-SHANAN HARDHAAF DHIYAATAN:
1) Afoola – oral literature
2) Baluunaa – aircraft
3) Barsaa – blanket (= uffatalkanii)
4) Burkaana – volcano
5) Dakkee – beach
6) Dammaqsituu – alarm clock
7) Jirofii – career (jiruu + ofii)
8) Limaaya – cereals
9) Maanya – ocean (= galaanbojaa)
10) Magaalmataa – capital city
11) Moodii – burial association (= “iddirii“)
12) Mosajii – software
13) Oddoo – garden (= dhayii, manduubee)
14) Rawwaa – gulf (Rawwaa Edan – Galf of Eden)
15) Qeddoo – watchman, guard (qeyee + eegduu; = waardiyyaa)
16) Reera – area (=irgee)
17) Sammuu – mind, brain
18) Surgaba – shorts (surree gabaabaa > surgaba)
19) Takkaataa – rare, scarce; unique
20) Tiriikaa – battery (= baatirii)
21) Tishoo – cornice
22) Ukkaa – asthma
23) Uqqubunnee – brain
24) Waafoo – roof (= gasarree, dikkaa)
25) Waaltina – standardization